क्रिकेट र राजनीति – Sajha Bisaunee
क्रिकेट र राजनीति
कष्टपूर्ण दैनिकी, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण नेपाली जनतामा निराशा व्याप्त भइरहेका बेला एक खेलमा मात्रै किन नहोस् जब नेपाली टीमले जीत हाँसिल गर्छ तब सिंगो मुलुक खुशीमा रम्न थाल्दछ । सबैका मुहारमा खुशी छाउँछ । नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले पटक–पटक यस्तै समयमा करोडौं नेपाली जनताको ओठमा खुशी भरिदिएका छन् । सबैले एकैचोटी उफ्रने र ताली बजाउने कुनै एउटा अवसर छ भने त्यो हो क्रिकेटमा नेपाली टीमको विजय । क्रिकेटले जोडेको छ नेपाललाई, खुशी दिएको छ नेपालीलाई, एक बनाएको छ जात जातिलाई । त्यसैले क्रिकेटले कमाल गरेको छ । हालै नामिवियालाई दुवै खेलमा पराजित गरी क्रिकेट टीमले फेरि एकपल्ट जनताको मुहारमा खुशी भरिदिएका छन् । यो खुशीमा खेलाडीको अथक मेहेनत र लगाव छ । उनीहरूको कडा परिश्रमले नै जीत दिलाएको हो । परिश्रम र मेहेनत खेलाडीहरूको हो तर जीत सम्पूर्ण नेपालीको । जीतले दिलाएको खुशी सम्पूर्ण नेपालीको हो । खेलाडीहरूबीचको एकता र त्यसभित्रको विविधता ऐतिहासिक छ । हिमाल, पहाड र मधेस सबै क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व छ । अनेक जात जातीका खेलाडीहरू एकै टीममा छन् । ती सबैको प्रयासले नै खेलमा विजय प्राप्त भएको छ । नेपाली राजनीतिले यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ ठूलो छ ।
वास्तवमा क्रिकेटबाट जनताले धेरै कुरा राजनीतिमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसरी क्रिकेटमा कुनै पनि खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्दा सबैजना उसको वाहवाही गर्छौं, जात–पात, भेष–भूषा, भाषा–धर्म केही हेर्दैनौं त्यसैगरी राजनीतिमा पनि राम्रो प्रदर्शन हेरेर व्यवहार गर्न सिक्नु पर्दछ । कसैले देशको लागि सही काम गर्दछ भने त्यो व्यक्ति जुनसुकै दलको भएता पनि सबैको प्यारो हुनु पर्दछ । तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन । अघिल्लो मन्त्रीमण्डलमा अत्यन्त चर्चित र जनप्रिय निर्णय लिने नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डितलाई यो पल्ट मन्त्रीमण्डलमा समावेश नै गरिएन । यस्ता धेरै नाम छन् जसले जनताका लागि काम गर्न खोजे र गुमनामीको अँध्यारोमा बिलाए । यदि बसन्त रेग्मीले राम्रो बलिङ गर्छन् भने उनलाई बाहुन भनेर हटाएर अर्को जातको बलर ल्याएमा त्यस्तै प्रदर्शन गर्न सक्दछ ? पारस खड्का क्षेत्री भएका कारण क्याप्टेन बनाउनु हुन्न भनेर कसैले सोच्दछ ? किन त्यस्तो सोचिँदैन भने सकभर राम्रो जो खेल्छ उसैलाई खेलाउनु पर्दछ, जात–पात सोचिनु हुँदैन अनिमात्र म्याच जितिन्छ । जब हामी सबै यो नियम खेलकुदमा मान्छौं भने देश चलाउने विषयमा किन नमान्ने ?
देशको भलो गर्ने व्यक्तिको जातमा जानु हुँदैन । जुन व्यक्ति भ्रष्ट छैन, जो काम गर्न सिपालु छ र जसको कामप्रति लगनशीलता छ त्यस्तो व्यक्तिले देश चलाउनु पर्दछ । जसरी क्रिकेटमा नेपालले विजय प्राप्त गर्न सकुन्जेल पारस खड्कालाई क्याप्टेनबाट हटाउँदा सबैले विरोध गर्छन् त्यसैगरी देशका लागि राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सबैले मिलेर लामो समय देशको क्याप्टेन बनाइ राख्न कोशिश गर्नु पर्दछ । तर गलत कार्य गर्ने र सधैं गफैमात्र दिने हो भने तिरस्कारको गोली समयमै हान्न सक्नुपर्दछ । जसरी क्रिकेटमा राम्रो खेलाडी राखेर देशले खेल जित्दछ त्यसरी नै राष्ट्रमा सक्षम र इमान्दार मान्छे राखेर मात्र देश बन्दछ । तर नेपालीहरू मान्छेभन्दा जात, जातभन्दा आफ्नो स्वार्थ सोच्दछन् । यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः ९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०२:५७